चीनबाट भरपर्दो व्हिस्की आपूर्तिकर्ता कसरी पहिचान गर्ने?-उद्योग समाचार-गोआलोङ रक्सी (समूह)
चीनबाट भरपर्दो व्हिस्की आपूर्तिकर्ता कसरी पहिचान गर्ने?
नयाँ प्रतिवेदन अनुसार, विश्वव्यापी व्हिस्की बिक्री अर्को दशकमा लगभग दोब्बर हुने गरी 108 सम्ममा US$ 2031 बिलियन पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ। मार्केट रिसर्च फर्म फ्याक्ट एमआरको अध्ययन अनुसार, विश्वव्यापी व्हिस्की बजार २०२१ र २०३१ बीच ६% को कम्पाउन्ड वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) मा बढ्ने छ। वृद्धिको यस दरमा, व्हिस्की राजस्व, जुन यस वर्ष US$6बिलियन पुगेको छ, 2021 वर्षको अवधिमा US$ 2031 बिलियन पुग्नेछ। यो प्रक्षेपणले पहिले देखेको भन्दा छिटो वृद्धि दर प्रतिनिधित्व गर्दछ। 60 देखि 108 सम्म, श्रेणी 10% को CAGR मा बढ्नेछ।
हामीले माथिको डेटाबाट देख्न सक्छौं, व्हिस्की वित्त धेरै वर्षको लागि आशावादी मानिन्छ, त्यसोभए कसरी एक विश्वसनीय व्हिस्की आपूर्तिकर्ता पहिचान गर्ने? म उदाहरणको रूपमा चिनियाँ व्हिस्कीमा निम्न सबैलाई आधार दिनेछु: कमजोर सम्झौताहरूको वार्ता, ग्राहकहरूसँग विस्तारित भुक्तानी सर्तहरू, बूम समयहरूमा अत्यधिक आत्मविश्वास।
1. प्रमाणपत्रहरू पहिचान गर्नुहोस्
चिनियाँ व्हिस्की आपूर्तिकर्ताहरूको गुणस्तर प्रमाणीकरणको कुरा गर्दा धेरै खरीददारहरूको न्यूनतम आवश्यकताहरू हुन्छन्। यद्यपि, आपूर्तिकर्ताहरूलाई उनीहरूको प्रमाणपत्रहरू हेर्न र प्रमाणित गर्न सधैं सजिलो हुँदैन। ISO, QS र अन्य धेरै सहित तपाईंको गुणस्तर मापदण्डहरूमा प्रमाणित भएका आपूर्तिकर्ताहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
2. वित्तीय स्थिरता मापन
निर्माणमा तीनवटा वित्तीय जोखिमहरू: कमजोर सम्झौताहरूको वार्ता, ग्राहकहरूसँग विस्तारित भुक्तानी सर्तहरू, बूम समयहरूमा अत्यधिक आत्मविश्वास। एक अनौपचारिक सर्वेक्षण अनुसार, लगभग आधा (50%) खरीददारहरूले एक आपूर्तिकर्तासँग काम गरेका छन् जो अप्रत्याशित रूपमा व्यापारबाट बाहिर गए।
3. उत्पादन जानकारी को सावधानीपूर्वक समीक्षा
विस्तृत उत्पादन विवरण र सम्बन्धित जानकारीले तपाइँलाई तपाइँको आवेदन को लागी सही उत्पादन छ कि भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ। मान्नुहोस् कि एक आपूर्तिकर्ताले सजिलै पहुँचयोग्य उत्पादन विशिष्टताहरू, चार्टहरू र सावधानी नोटहरू प्रदान गर्न समय लिन्छ। यस अवस्थामा, यसले देखाउँछ कि उनीहरूले तपाइँको समयको कदर गर्दछ र तपाइँलाई जित्न र तपाइँको व्यवसाय राख्न को लागी कुनै पनि तरिकामा मद्दत गर्न इच्छुक छन्।
4. पहुँचयोग्य सूचीमा जानकारी अनुरोध गर्नुहोस्
तपाईंको चिनियाँ व्हिस्की आपूर्तिकर्ताको दृश्यता हुनु लाभदायक छ। यसले ग्राहकको रूपमा तपाईप्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्धता र तपाईलाई आवश्यक परेको बेला उपलब्ध गराउने क्षमता देखाउँछ।
5. ग्राहक सेवामा उनीहरूको प्रतिबद्धता जाँच गर्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो को लागी अपेक्षा र नराम्रो को लागी योजना। प्रत्येक सम्भावित व्हिस्की आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान गरिएको ग्राहक सेवाको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। यदि तपाइँ 24-घण्टा लाइट-आउट उत्पादनको साथ काम गर्नुहुन्छ र दिन वा रातको कुनै पनि समयमा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कल गर्न आवश्यक पर्दछ, त्यसपछि यसलाई तपाइँको अनुसन्धानमा समावेश गर्नुहोस्। तिनीहरूको फिर्ती नीति सम्बन्धी सम्झौताको भाषा पनि गहिराइमा बुझ्नुपर्छ। तपाईं झोलामा अड्कन चाहनुहुन्न।
6. वितरण समय र नेतृत्व समय तथ्याङ्क प्राप्त गर्नुहोस्
वितरण प्रदर्शन औद्योगिक खरीददारहरूको लागि कुञ्जी हो। समय समयमा डेलिभरी दरहरूको तुलनामा तिनीहरूको डेलिभरी समय पूर्वानुमानको लागि सोध्नुहोस्। यदि यी प्रदान गर्न सकिँदैन भने, तिनीहरू ट्र्याक गरिँदै छैनन् वा धेरै राम्रो छैनन्। कुनै पनि कारण चिन्ताको कारण हो।
7. भुक्तानी सर्तहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्
चिनियाँ व्हिस्की डिलर पहिचान गर्नुहोस् जो तपाइँको भुक्तानी आवश्यकताहरु संग काम गर्न इच्छुक छ। दीर्घकालीन आवश्यकताहरू र डेलिभरी कार्यक्रमहरूले PO वा Net 30 लाई कसरी बिल गरिन्छ भनेर निर्धारण गर्न सक्ने हुनाले, तपाईंलाई आफ्नो व्यवसायलाई राम्ररी चलाउनको लागि के चाहिन्छ भनेर सोध्न नडराउनुहोस्।
8. सम्पर्क सन्दर्भहरू
प्रशंसापत्र, प्रशंसापत्र, प्रशंसापत्र! आपूर्तिकर्ताले काम गर्ने अर्को व्यवसायबाट अनुमोदन टिकट तिनीहरूको वास्तविक क्षमताहरूको राम्रो संकेत हुन सक्छ। यद्यपि गोपनीयता सम्झौताहरूले यस सन्दर्भमा कठिनाइहरू निम्त्याउन सक्छ, आपूर्तिकर्ताहरूसँग सधैं खुसी ग्राहकहरू वा सन्दर्भहरूको तयार सूची हुनुपर्छ - र यो अझ राम्रो छ यदि तिनीहरूको वेबसाइटमा छ भने।
9. फिल्ड भ्रमणहरू
यदि तपाइँसँग आपूर्तिकर्ताको उच्च अपेक्षाहरू छन् र एकै समयमा उनीहरूलाई साइटमा भ्रमण गर्ने समय छ भने, त्यसपछि राम्रो छैन। चिनियाँ व्हिस्कीका सामग्रीहरूको लागि सामान्य - पानी र अन्न र खमीर - तपाईं सम्बन्धित पानीको स्रोत र बढ्दो अन्न र खमीर प्रकारहरूको लागि आधार भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
10. सरकारी भन्सार डाटा
प्रत्येक देशको भन्सार डेटामा चिनियाँ ह्विस्की आपूर्तिकर्ता मार्फत, तपाईले कम्पनीको उत्पादन दिशा, वित्तीय बल, सञ्चालन विदेशी व्यापार समय, आदि, चिनियाँ व्हिस्की आपूर्तिकर्ताको बहु-आयामी विश्लेषणबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको शक्ति निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
अघिल्लो: चीनबाट व्हिस्की कसरी आयात गर्ने?
अर्को: के चीनले व्हिस्की उत्पादन गर्छ?